कल बन्द समय के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा हेर्नुहोस्
सुरु ऋण wiki कल अवधि
कल-अफ अवधिको के हो?
तपाईं एक ऋण उधारो गर्न चाहनुहुन्छ किनकी तपाईं एक घर बनाउन चाहानुहुन्छ वा सजिलै केहि सुन्दर मज्जा लिन चाहानुहुन्छ? त्यसपछि तपाइँ सबै सम्भावित सर्तहरूको बारेमा राम्ररी सूचित हुनुपर्छ। साथै कल अवधि यसको भाग हो।
क्रेडिट संस्थाले अवधिको अवधि प्रदान गर्दछ जुन तपाईंले क्रेडिट ब्यालेन्स पुन: प्राप्त गर्नु पर्छ। कहिलेकाहीँ सबै पैसा एक पटकमा दिइएको छैन, तर यसले तपाईंलाई प्राप्त गर्न लिन्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईं घर बनाउन चाहानुहुन्छ भने, तपाईंसँग कल-टाइम अवधि छ। सबै पछि, तपाईंलाई बिलहरू तिर्न र अधिक तिर्नुपर्छ। त्यसैले तपाईले पनि निर्दिष्ट अवधिमा पैसा पाउनुपर्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ एक निश्चित उद्देश्यको लागि पैसा प्रयोग गर्नुहुन्छ। तपाईं ऋण पहिले नै भनिएको छ जब पैसा प्रदान गरियो, को लागि पैसा आवश्यक छ। त्यसपछि तपाइँले यी उधारो रकमहरू पनि उचित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। धेरै क्रेडिट संस्थाहरू पनि प्रमाण माग्छन् र यो असामान्य छैन। यसैले तपाइँले ऋणसँग सम्बन्धित सबै रसिदहरू हटाउनुपर्दछ।
यदि तपाईं छैन भने, त्यसपछि क्रेडिट कम्पनीले तपाईंलाई राम्रो शुल्क लगाउनेछ। त्यसोभए तपाई सधैँ आफ्नो भावनामा कार्य गर्नु पर्छ र यथासंभव ईमानदार हुनुहोस्। ध्यान दिनुहोस् कि तपाईं कुनै पनि मामला ईमानदार हुनु पर्छ। एक कल अवधि एक अनुबंधिक समय सीमा हो। यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न भने, केवल सम्झौतामा हेर्नुहोस् र तपाइँलाई आवश्यक सबै कुराहरू हेर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो बैंक सल्लाहकार कसरी जाँच गर्न सक्नुहुनेछ कि कल अवधि कसरी छ। किनभने यो साँच्चै तपाइँका सबै प्रश्नहरूको लागि उपलब्ध हुनेछ। यदि यो मामला होइन भने, तपाईलाई शंकास्पद हुनुपर्छ। तपाईंसँग कसैलाई आपतकालीन अवस्थामा सोध्न हुनुपर्दछ। यो व्यक्ति सधैँ उपलब्ध हुनेछ। कृपया निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईसँग प्रश्नहरूको लागि टेलिफोन नम्बर छ। यो थप प्रश्नहरू छलफल गर्ने एकमात्र तरिका हो। आज, सबै चीजहरू अन्तिम समयको साथमा गरिन्छ, र यसमा तपाईंसँग एक समय समावेश छ ऋण रकम पुन: प्राप्त।
त्यसैले बस सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले पैसा प्रयोग गर्नुभए जस्तै पैसा प्रयोग गरिरहनु भएको छ र तपाईले केहि गलत गरिरहनु भएको छैन। यदि तपाईं म्यादलाइन पास गर्न दिनुहुन्छ भने, तपाईलाई सजायको साथ लगाउनु पर्छ। त्यो हुँदैन, किनभने यो प्राय: पैसाको बारेमा हो। यो पैसाले तपाईलाई प्रसिद्धि गर्न निश्चित रूपमा निश्चित गर्दैन, तर तपाईं यसको साथ धेरै सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं पैसा चाहिँदैन भने, तपाईंलाई बैंकसँग कुरा गर्नु पर्छ। त्यसोभए, त्यहाँ सजाय हुन सक्छ। तपाईंले संधि पालन गर्नुभएन। सावधान रहनुहोस्, र जब तपाईले ऋण लिनुभयो भने सँधै सावधानीपूर्वक सोच्नुहोस्। दुर्भाग्यवश, फिर्ता असुरक्षित हुन्छ यो फिर्ता क्रेडिट बाट जोगिन। धेरै घर निर्माणकर्ता र अन्य व्यक्तिलाई पैसामा निर्भर गर्दछ र कल अवधि पनि आदर गरिन्छ। त्यसकारण, तपाइँ यस समस्याको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्दैन। यद्यपि, यदि तपाई आफैलाई सूचित गर्नुभयो भने यो राम्रो कुरा हो।
त्यहाँ यो ऋण वा क्रेडिट धेरै चीजहरू विचार गर्न सकिन्छ। तपाईंले देख्नुहुनेछ कि तपाईं केहि गलत गरिरहनुभएको छैन, यदि शंकामा तपाईले मात्र फेरि सोध्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईं पूर्णतया निश्चित हुनेछ कि तपाई सबै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। कल अफ अवधि एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो, जुन सम्झौतामा पाइन्छ। यद्यपि, धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यसको साथ केहि गर्न सक्दैनन्। यसकारण, त्यहाँ बैंक प्रश्न गर्ने सम्भावना छ।
अर्को लेखजमानत मूल्य